Rio Ferdinand oo shaaca ka qaaday sir cusub oo layaab leh kuna saabsan dabeecadda Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Yurub) 05 Maajo 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa shaaca ka qaaday sir cusub layaab leh ee ku saabsan dabeedaca Cristiano Ronaldo, taasoo xiddiga reer Portugal ka dhigtay midka ugu fiican taariikhda kubada cagta.
Rio Ferdinand ayaa wuxuu cadeeyay in Cristiano Ronaldo aysan ku filneyn inuu goolal muhiim ah ka dhaliyo kaliya kulamada daciifka ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah, isla markaana uu had iyo jeer damacsanaa inuu goolal ka dhaliyo sida kulamada Champions League iyo Koobka Adduunka.
Ferdinand ayaa sidoo kale tilmaamay in Ronaldo maskaxdiisa ay ka duwan tahay dhamaan ciyaartoyda adduunka, sababa la xiriira qaabka uu u fikirayo iyo Talaabooyinka uu qaadayo si uu u noqdo kan ugu fiican.
Haddaba halyeeyga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa wareysi uu bixiyay waxaa daabacay wargeyska “Marca” ee dalka Spain, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waan ogeeyn inuu yahay qof karti leh, laakiin wuxuu gaarka ku yahay ayaa waxay tahay in maskaxdiisa ay ka duwan tahay qof kasta oo kale.”
“Wiilkan (Cristiano) kuma qanacsaneyn inuu goolka guusha ka dhaliyo Fulham daqiiqadaha ugu dambeeya, ee wuxuu doonayey inuu sidaas ku sameeyo finalka Champions League, koobka adduunka iyo koobka Qaramada Yurub.”
“Had iyo jeer waan la hadlaa isaga, waxaana jira waxyaabo qaar uu ka cawdo, wuxuu gaaray meesha ugu sarreysa, laakiin wuxuu wali ka walaacsan yahay waxa ay dadku ka sheegaan isaga, wuxuuna aaminsan yahay inuusan helin qadarintii ay aheyd inuu helo, laakiin tani waa waxa isaga ka dhigaya inuu yahay kan ugu fiican, iyo inuu noqdo mid naga duwan anaga,”